Indlela yokwenza i-SIM swap kwa-Vodacom
Kunezizathu eziningi ezingenza ukuba udinge i-SIM entsha. Ngenhlanhla, lokhu akusho ukuthi kufanele uthole inombolo entsha. Ungenza i-SIM swap kwa-Vodacom futhi ugcine inombolo yakho endala, kungakhathalekile ukuthi uku-Prepaid noma kunkontileka.
Kunezizathu eziningi ezingenza ukuba udinge i-SIM entsha. Kungenzeka ulahlekelwe noma ulinyalelwe yi-SIM yakho yamanje noma udinga ukushintsha i-SIM yakho uthole i-MicroSIM noma i-NanoSIM encane ezongena kudivayisi yakho entsha.
Ngenhlanhla, lokhu akusho ukuthi kufanele uthole inombolo entsha. Ungenza i-SIM swap kwa-Vodacom futhi ugcine inombolo yakho endala, kungakhathalekile ukuthi uku-Prepaid noma kunkontileka.
Uma wenza i-SIM swap, onke amasevisi akho aqhubeka engashintshile ngenxa yokuthi amasevisi axhunywe enombolweni yakho yeselula hhayi enombolweni ye-SIM.
Inombolo ye-PIN ne-PUK ye-SIM entsha ngeke zifane nezekhadi lakho le-SIM elidala.
Ulwazi lwakho lwe-RICA nalo luzoshintshelwa ku-SIM entsha uma i-SIM swap ibe yimpumelelo.
Izinzuzo ze-SIM swap
Ugcina inombolo yakho yeselula ku-SIM entsha.
Ugcina wonke ama-bundle akho akhona, amasevisi ne-airtime.
Ugcina izaphulelo namaphromoshini akho (uma ekhona).
Indlela yokwenza i-SIM swap ye-Prepaid
Thenga i-starter pack esisha se-Prepaid bese ubhalisela i-RICA.
Dayela u-136 ku-SIM entsha.
Khetha inketho yokusebenzisa inombolo yakho yeselula endala.
Uzoxhunywa nesisebenzi sesikhungo sezingcingo esizokwenzela i-SIM swap.
Faka i-SIM yakho entsha kudivayisi yakho. Kuzothatha phakathi kwamahora amabili kuya kwangu-24 ukuba ikhadi lakho elisha le-SIM lisebenze.
Indlela yokwenza i-SIM swap yenkontileka
Uma ufuna ukushintsha i-SIM yakho ukuze ilingane kudivayisi entsha ethatha i-SIM encane noma ulahlekelwe yi-SIM yakho, yiya esitolo esiseduze sakwa-Vodacom futhi umsizi wasesitolo uzokusiza ukuba wenze ushintsho. Sicela uqaphele ukuthi kungase kube nenhlawulo yokuvula ikhadi le-SIM.
Khumbula ukuhamba nalezi zinto:
Umazisi wakho noma iphasipoti yaseNingizimu Afrika.
Inombolo yakho yamanje yeselula yakwa-Vodacom (uma unayo).
I-SIM yenkontileka engafakwa (ungayithenga kunoma iyiphi i-Vodacom Shop).
Kuzodingeka wenze i-RICA uma uthenga i-SIM entsha ngakho phatha ubufakazi bekheli lakho.
Umsizi esitolo uzokusiza ugcwalise amaphepha adingekayo. I-SIM swap izokwenziwa ngokushesha futhi i-SIM yakho entsha izoqala ukusebenza cishe emahoreni angu-2-24.
Usuzwile ngama-SIM swap awumgunyathi?
Lokhu kwenzeka uma izigebengu zenza i-SIM swap ewumgunyathi ukuze zithole imininingwane yakho. Funda kabanzi ukuthi kusebenza kanjani nokuthi yini ongayenza ukuze uzivikele engosini esicini yethu se-SIM swap ewumgunyathi.
Emzamweni wokulwa nomgunyathi, i-Vodacom izokuthumelela umyalezo wesixwayiso ukukwazisa ukuthi ukhona ocele i-SIM swap yenombolo yakho.
Uma ucele i-SIM swap, izokwenziwa ngemuva kwamahora ama-2.
Uma ungayicelanga i-SIM swap, ungavala isicelo ngaphambi kokuba yenziwe ngokushayela ku-135.
Ukuze uthole usizo namacebiso athe xaxa, yiya ku-Vodacom Help me.